Mpangalatra fiara raindahiny: Efa in’efatra nigadra ilay rangahy, mbola tratra indray
mardi, 23 juin 2020 21:44
Fanofana fiara ho any Toamasina hitaterana fitaovana fitsaboana ilay valan'aretina Covid-19 no nahitany fiara Sprinter iray, sy nifanarahany tamin’ny mpamily. Rehefa tonga tao amin'ny hotely iray tao Toamasina ilay rangahy sy mpamily ny fiara ary ny mpanampy azy dia niara-nahandro sakafo ary niara-nisakafo ; teo no nanararaotan'ilay rangahy nanomezana fanafody fampatoriana an'ilay mpamily sy ilay mpanampy azy ka tsy tafafoha intsony ireto farany raha tsy ny ampitsony iny. Ny fiara sy ny taratasin'ny fiara kosa dia efa noentin'ilay rangahy nitsoaka niaraka tamin'ny finday an'ireo roalahy.
Nametraka fitoriana tany amin'ny Polisy sampana heloka bevava sakelika fahatelo moa ny tompon'ny fiara ka raikitra ny fanadihadiana.
Rehefa natao ny fikarohana dia tratra teny amin’ny lalam-pirenena faha-44, anelanelan’ Ambatondrazaka sy Vohidiala ilay fiara ka tsy nisalasala ny Polisy misahana ny heloka bevava Sakelika faha3 nisambotra ilay rangahy avy hatrany.
Efa notapenan’ilay rangahy ny fitaratra tamin’ilay fiara ho toy ny « fourgon » raha « vitré » izy teo aloha. Fantatra ihany koa fa efa in'efatra nigadra ity rangahy ity amin'ny resaka halatra fiara hatrany.